ရနံ့ကပါ လူကို အကျိုးပြုစေတဲ့ ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်း - Knowledgeworms
August 7, 2021 August 7, 2021 AuroraLeaveaComment on ရနံ့ကပါ လူကို အကျိုးပြုစေတဲ့ ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်း
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် သောက်သုံးနေတဲ့ ကော်ဖီဟာ ကျန်းမာရေးကို အလွန် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုများကို လျော့ကျ သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပြီး အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေကိုပါ လျှော့ ချ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာနှင့် အသဲ နှင့် ဆက်စပ်သည့် ရောဂါများကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေများကိုလည်း‌ လျှော့ချပေးပါတယ်။
ဒီလို အကျိုးကျေးဇူး အများစုဟာ ကော်ဖီကို သောက်သုံးခြင်းကနေ ရရှိလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကော်ဖီရဲ့ ရနံ့ဟာ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရင် ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ? တကယ်လို့ ကော်ဖီမှာ အနံ့ ပါမလာဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စိတ်ပညာဂျာနယ်တခုတွင် ဘွဲ့ရစီမံခန့်ခွဲမှု အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ (GMAT) ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသည့် စီးပွား ရေး ကျောင်းသား ၁၁၄ ယောက်ကို လေ့လာခဲ့သည့် လေ့လာမှု တခု၏ ရလဒ် ကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အက္ခရာ သင်္ချာ စာမေးပွဲအတွက် မေးခွန်း ၁၀ ခု အတွက် အဖွဲ့တဖွဲ့ကို ကော်ဖီအနံ့တို့ဖြင့် ဖြည့်ထားသည့် အခန်းအတွင်းမှာ ဖြေဆိုခိုင်းပြီး အခြား အဖွဲ့ကိုတော့ ကော်ဖီရနံ့မရှိသည့် အခန်းတွင် ဖြေဆိုစေပါတယ်။
ဖြေဆို အပြီးမှာ Starbucks ကော်ဖီ ရနံ့သင်းနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည့် အခန်းတွင် ဖြေဆိုသည့် အဖွဲ့မှာ အခြားအဖွဲ့ထက် သိသိသာသာ အမှတ်ပိုကောင်းနေတာကို လေ့လာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
၎င်းတို့၏ ပြောပြချက်အရ သူတို့ဟာ အခန်းထဲသို့ ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကော်ဖီနံ့သင်းသင်းကို ခံစားရပြီး မှတ်ဥာဏ်ပို အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး သင်္ချာ ပြ သနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ပိုပြီး အဆင့်သင့် ဖြစ်မယ်လို့ ခံစားရကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ကျောင်းသားများဟာ ကော်ဖီရနံ့ကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက် စိတ်ပညာအရ placebo effect လို့ခေါ်တဲ့ အတုအယောင် သက်ရောက်မှု တခုကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်မှု ထင်ရှားပါတယ်။
နောက်ထက် ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ၎င်းတို့၏ ယခင်က ကော်ဖီသောက်သုံးတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ကော်ဖီဟာ နိုးကြားမှုကို မြှင့်တင်နိုင်တဲ့ ခံ စားမှုကို ရနိုင်သည်ဆိုသည့် စိတ်ကြောင့် ကော်ဖီရနံ့ကို ရရှိသည့်အခါ တကယ်သောက်သည့်အလား အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကဖင်းဓာတ် အမှန်တကယ် မရှိဘဲနှင့်ပင် ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ကျောင်းသားများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်တုန်းကလည်း အိပ်ရေးမဝသည့် ကြွက်များဟာ ကော်ဖီရနံ့ကို ရရှိသည့်အခါ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စိတ်ဖိစီးမှုများကို သက်သာစေနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံရှင်များက တွေ့ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
ကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ကော်ဖီတွေကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးတာကတော့ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်ဘဲ နှလုံးရပ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဩစတေးလျ သုတေသီများအဆိုအရ တနေ့ကို ကော်ဖီ ၆ ခွက်နှင့် အထက် သောက်သုံးခြင်းဟာ နှလုံးနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့‌ ရောဂါတွေရရှိဖို့ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကော်ဖီ တခွက်တွင် ကဖိန်းဓာတ် ၇၀ မှ ၁၄၀ မီလီဂရမ်လောက် ပါဝင်ပါတယ်။ သုတေသီများကတော့ တနေ့လျှင် ကဖိန်းဓာတ် ၄၀၀ မီလီ ဂ ရမ်နှင့် အောက် သောက်သုံးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် တနေ့ ကော်ဖီ ၃-၄ ခွက်ထက် မပိုအောင် သောက်သုံးတာဟာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိမယ့် အပြင် အပိုဆုအဖြစ် ကော်ဖီရနံ့မှ နေပြီး စိတ်ခွန်အားများကိုပါ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။